Tetibolam-panjakana 2020: 10 269, 9 miliara Ariary ny fandaniana rehetra | NewsMada
Tetibolam-panjakana 2020: 10 269, 9 miliara Ariary ny fandaniana rehetra
Lany teo anivon’ny Antenimieram-pirenena, ny faran’ny herinandro teo, ny tetibolam-panjakana 2020. Notaterin’ny minisitra Randriamandrato Richard, ny fametrahana politika ampiharana fitsipika henjana momba ny fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana (PGE). Ho hita amin’izany ny fanohizana ireo asa efa natomboka, fandaniana ho an’ny fotodrafitrasa, ny sehatra sosialy, ny fandriampahalemana, ho tsapan’ny mponina sy hanana fiantraikany mivantana eo amin’ny andavanandrony. Hitentina 10 269,9 miliara Ariary ny fandaniam-bola rehetra. Fandaniam-bola mahazatra 5 221,6 miliara Ariary ; fampiasam-bola, tombanana ho 5 048,3 miliara Ariary.
Amin’ny maha Nosy, tokony hotrandrahina araka ny tokony ho izy ho tombontsoan’ny Malagasy ny harena voajanahary. Araka ny fanadihadiana nataon’ny Banky iraisam-pirenena, very 500 tapitrisa dolara isan-taona eto noho ny fanaovana tsinontsinona ireo harena an-dranomasina. Hita anatin’ny politika nosoritan’ny govenemanta ny fanomezana fitaovana manaraka ny toetrandro ho fanaraha-maso ireo morontsiraka sy ireo jono. Hatsaraina ihany koa ny fitantanana ireo faritry ny morontsiraka avy amin’ny fanampiana omena ireo vondron’olona ifotony.
Ala 40 000 ha isan-taona
Nambara ihany koa ny fandaharanasa fandrakofana ala sy fiarovana ny tontolo iainana. Loharanon-karena ny « Fandrakofana ala indray an’i Madagasikara ». 40 000 ha isan-taona farafahakeliny ny tanjona, hampiasana zana-kazo miisa 80 tapitrisa. Mitaky ny firaisankinan’ny rehetra izany, mpianatra sy ireo vondrom-bahoakam-paritra. Andrasana amin’izany ny hahafahana mampihena ny voka-dratsin’ny fiovan’ny toetry ny andro ho amin’ny ho avy, hampitombo ny mpizahatany, ary hanatsara ny fari-piainan’ny mponina. Ho tanterahina ireo ezaka ireo miaraka amin’ny fampiroboroboana ny angovo azo havaozina hialàna tsikelikely amin’ny fampiasana ireo angovo mandeha amin’ny solika. Tanjona apetraka ho an’ny dimy taona ho avy ny fampitomboana avo roa heny ny famokarana herinaratra. Vita an-tsoratra iny ny tetibola, mbola handalo eo anivon’ny Antenimieran-doholona. Ho hita eo ny fanatanterahana azy.